वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा दाङ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा दाङ
वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा दाङ
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड June 6, 2019	0 206 Views
घोराही। बढ्दो अव्यवस्थित औद्योगिक विकास, निर्माणाधीन सडक, पुल पुलेसा, प्लाष्टिकजन्य वस्तुुको उच्च प्रयोग, इ“टा भट्टा, खानी उत्खननलगायतका कारण दाङ वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले २०७५ मा गरेको सर्वेक्षणअनुुसार दाङमा वायुु प्रदूषण अत्यधिक रहेको छ। अव्यवस्थित औद्योगिक विकासका कारण दाङ वायुु प्रदूषणको हिसाबले तेस्रो स्थानमा रहेको तथ्यांक सार्वजानिक भएको छ। वातावरण विभागले गरेको सर्वेक्षण अनुुसार यस्तो नतिजा आएको हो। बढ्दोे सवारी साधनको चाप, सिमेन्ट उद्योग स्थापना, वन फडानी तथा खानी उत्खनन्, इ“टाभट्टा, धुलाम्मे सडक, प्लाष्टिक प्रयोगलगायत मानव क्रियाकलापले दाङको वायुु अत्यधिक प्रदूषित बनेको जनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले श्वास प्रश्वासका लागि २ दशमलव ५ पर्टिकुलर म्याटरको वायुु स्वच्छ मानेको छ भने सरकारले ४० माईक्रोग्राम प्रति क्युविकसम्मलाई मात्रै मान्यता दिएको छ।
तर दाङमा ८७ माइक्रोग्राम प्रतिक्युविक फेला परेको छ। जुुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा दर्जनांै र राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा करिब पा“च गुणा बढी हो। जसले मानव स्वास्थ्य र वातावरण माथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। जसको मुख्य स्रोत नै सिमेन्ट उद्योग, इ“टाभट्टा, यातायातका साधन, धुुलाम्मे सडक, प्लाष्टिक धुवा, भुसे चुुलो, गुुइठा, दाउरा र अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन रहेको छ। सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको प्रभाव परिरहेको उहा“ले बताउनुभयो। जहाक्षयरोग, दम, मुटु तथा फोक्सो र क्यान्सरका लक्षण देखा पर्ने गर्दछन्। तथ्यांकमा मात्रै होइन वायुु प्रदूषणको पीडा प्रत्यक्ष भोगिरहेका उद्योगपीडितहरुको भनाइ पनि उस्तै छ। घोराही–४ का दिलबहादुर घर्तीले भन्नुुभयो– ‘बारीका सागपात, घरका छानाभरि धुुलैधुलो हुुन्छ।’
सा“झ सुत्यो बिहान उठ्दा नाकका प्वालभरि कालो बसेको हुन्छ। मुखमा चिरिप–चिरिप ढुुंगा लागिरहन्छ, अवस्था यस्तो छ।’ मान्छे लालाबाला सबैले धुुलोधुु“वाको पीडा भोग्नुु परिरहेको छ।
‘आफ्नो जीउ र वस्तुुभाउ जोगाउन मुस्किल परेको छ हामीलाई तर कसैले हाम्रा पीडा सुन्दैनन्। कहा“ जाने हो ? जा“दा आउ“दा थाकिसक्यौं ? बारीका सागदेखि नाक प्वालसम्म धुलो बस्छ। खै हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने अधिकार ?’ उहा“ले थप्नुुभयो।
राज्यले औद्योगिक क्षेत्रको नियमन तथा निगरानी बढाउन नसक्दा यस्तो जोखिम मोल्नुु परिरहेको पीडितहरुको गुुनासो छ। नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा १ ले प्रत्येक नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ तर त्यसको अनुुभूति गर्न नपाएको उद्योग पीडितहरुको गुुनासो छ।
वर्षेनि छ हजार बिरामी
बढ्दो वायुु प्रदूषणका कारण दाङमा वर्षेनि छ हजार श्वासप्रश्वासका विरामी हुने गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागको तथ्यांकअनुुसार सिमेन्ट उद्योग, खानी, इ“टाभट्टा र धुुलाम्मे सडकका कारण वर्षेनि क्षयरोग, मुटु, फोक्सो, क्यान्सरलगायतका बिरामी करिब ६ हजार जना थपिदै आइरहेको छ। जसको मुख्य कारण वायुु प्रदूषण रहेको जनाइएको छ। दूषित वायुुकै कारण नेपालमा वर्षेनि ३५ हजार बिरामी पर्ने गरेका छन्। जसमा काठमाडांै र दाङ अग्रपंक्तिमा छन्। दूषित हावाकै कारण करिब ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
चुुनौती बन्दै उद्योग व्यवस्थापन
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीले दाङका उद्योग व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको बताउनुुभएको छ। मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष भरतराज देवकोटाको अध्यक्षता तथा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रममा उहा“ले यस्तो बताउनुभएको हो।
Previous: भीआइपीको ओइरोले तनावमा सुरक्षाकर्मी
Next: स्वर्गद्वारीमा गौमूत्रबाट औषधि